हो, रेल खाना पनि शानदार तर हुन सक्छ सबै भन्दा राम्रो रेल खाना कोपेनहेगन गरेको noma गर्न तुलना! नर्डिक खाना को बिकन छ, र तपाईं जान यसलाई जाँच गर्नुहोस् शक्ति सबै गर्नुपर्छ. मात्र गर्छ यो एक युरोप मा खाद्य लागि सर्वश्रेष्ठ शहर मध्ये एक छ, eatery has been the No. 1 वर्ष को लागि San Pellegrino सूचीमा स्थान! हो, मूल्यहरु उच्च हो, तर तपाईं प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ स्वाद यो लायक छ. तपाईं रेल द्वारा स्कैनडिनेविया गर्न भन्दा पप गर्न चाहनुहुन्छ भने, कोपेनहेगन भर्खरै गरिरहेको लागि ठूलो गेटवे स्टप छ.
हामी छाप our list of Best Cities for Foodies with Trieste, इटाली
ट्रियस्टे अष्ट्रो-हंगेरी साम्राज्य म विश्व युद्ध सम्म गर्न belonged. यो वास्तवमा सही यहाँ ट्रियस्टे गरेको स्वादिष्ट व्यञ्जन महत्त्व होइन्छ. किन? किनभने ट्रियस्टे इतिहास यसको भोजन मा एक पर्याप्त प्रभाव बाँकी. Atypical of विशिष्ट इटालियन व्यञ्जन, ट्रियस्टे पास्ता यस्तो अनौठो Combos र prides पिज्जा sauerkraut र कटा ससेज सँगसँगै, यस्तै र. भव्य खाना आनन्द, मलाईदार चकलेट, र शहर मा शानदार कफी जेम्स जइस Ulysses लेखन सुरु जहाँ. को Adriatic मार्फत एक आश्चर्यजनक दृश्य आफ्नो भोक चोट छैन, या त. इटाली र स्लोभेनिया बीच जडान रेल द्वारा सिद्ध छ, त्यसैले तपाईं स्लोभेनिया एक मौका दिन सक्छन् जबकि छिमेकी मा.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#traveleurope खाद्य खन्चुवा foodies रेल यात्रा